Madaxweyanaha Hiiraan State oo jaaliyada reer Hiiraan ee Ethiopia u mahadceliyey
Posted by admin on March 31 2011 13:33:35
Mogdisho:(hiranstate.com)-Madaxweyanaha Hiiraan State ee Somaliya Dr Mohamud Abdi Gaab ayaa uga mahadceliyey jaaliyada reer Hiiraan ee Ethiopiya siday u garab istaageen Hiiraan State.
Mogdisho: (hiranstate.com)-Shirar is deba joog ah oo maalmahani ka socday caasimada dalkaasi Ethiopia ee Addis Ababa oo lagu taageerayey Hiiraan State ayuu madaxweyanaha Hiiraan State Dr Mohamud Abdi Gaab uga mahadceliyey jaaliyada sidii wanaagsaneyd ee ay shirka u soo abaabuleen.
Jaaliyada reer Hiiraan ee ku nool Ethiopiya waxey ka mid tahay jaaliyadaha ugu badan ee reer Hiiraanka ku nool East Africa waxeyna si weyn u taageersan yahiin dowlad goboleedka Hiiraan State ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Dr Mohamud Abdi Gaab.
Dhawaantan ayey aheyd markii waxgarad, culuma'udiin, siyaasiyiin iyo dhalinyaro reer Hiiraan ah ay shir ku qabsadeen dalkaasi Ethiopiya, jaaliyada ayaa madaxweynahooda ka codsaday inuu mar uun soo booqdo si bey yiraahdeen u tusiyaan kooxaha Hiiraan State ka soo horjeeda ineysan ka turjumeyn rabitaanka shacabka Hiiraan.
Shirkii dhawaantan ka dhacay Addis oo ay jaaliyadu soo qaban qaabisay ma aheyn shirweyn shirka rasmiga ah waxaanu qabandoonaa marka madaxweyanaha HS gaaro gudaha amaba na soo booqdo ayey yiraahdeen.
Inaksta oo ay jaaliyadu muujiyeen taageeradooda hadane madaxweyanah HS ayaa kaka mahadceliyey sidii wacneyd oo ay isku ababuleen, isagoo balan qaaday inuu maamulkiisa ku soo dari doono mucaaradka ka soo horjeedo isagoo arintaasi geed dheer iyo mid gaaban u gorayo.Sida lagu helayo warar lagu kasoon yahay madaxweynaha HS ayaa isbedlo siyaasaded oo ay dadku maalmaha inagu soo aadan ku farxi doonaan ka wada gudaha Somaliya.
Shacabka Hiiraan ayaa iyagu ah kuwo daneynaya in la helo qaranimadii ka luntay shacabka Somaliyeed, waxeyna si taasi lagu gaaro ku mashquulsan yahiin sidii ay iyagu marka hore isku soo dhisi lahaayeen oo ay dowlad goboleedka Hiiraan State u garab istaagi lahaayeen kedibna Somaliyweyn u raadin lahaayeen.
Maamul goboleedka Hiiraan State ayaa maalmaha inagu soo aadan noqon doona midka ugu hadal heynta badan maamulada ka jira dalka Somaliya kedib marka siyaasadiisa gudaha wax badan ka bedelo, inkasta oo aanu dooneyn in aanu ka hor dhacno arintasi.